अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सवमा बास्केटबल जारी | eAdarsha.com
अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सवमा बास्केटबल जारी
पोखरा, १२ पुस। अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन महोत्सवको दोस्रो चरणअन्तर्गत छोम्रोङमा भएको ल्होसार मेलामा बुधबार क्लबस्तरीय बास्केटबल प्रतियोगिताका लिग चरणका खेल सम्पन्न भएका छन्।
अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन समितिको आयोजनामा भएको उक्त प्रतियोगितामा बिहीबारदेखि नकआउट चरणका खेल हुनेछन्। प्रतियोगितामा कास्की, पर्वत र काठमाडौंका ८ टिम सहभागी छन्। प्रतियोगितामा विजेताले ५० हजार र उपविजेताले ३० हजार रुपैया“ प्राप्त गर्नेछन्।
लिग चरण भएको पहिलो खेल रोंधी क्लब घान्द्रुक बी र ताङतिङ युवा क्लबबीचको प्रतिस्पर्धामा ६४ स्कोरका साथ ताङतिङ युवा क्लब विजयी भएको छ। रोधी क्लब घान्द्रुक बी ले २६ स्कोर पाएको थियो। ताङतिङ युवा क्लबका जर्सीनं. ८ धन गुरुङले सबैभन्दा बढी १६ स्कोर दिलाएका थिए। त्यस्तै, उल्लेरी युवा क्लब दाङसिङ र सेञ्चुरी युवा क्लब, छोम्रोङ ए बीच भएको दोस्रो खेलमा २९ का विरुद्ध ३३ स्कोरले उल्लेरी युवा क्लब विजयी भएको छ। यस खेलमा उल्लेरी युवा क्लबका थम पुनले सबैभन्दा बढी २० स्कोर दिलाएका थिए।
त्यसैगरी, रोंधी क्लब घान्द्रुक ए र विशाल मिलन केन्द्र (बीएमके) बीच भएको प्रतिस्पर्धामा २८ स्कोरका विरुद्ध ६५ स्कोरका साथ बिशाल मिलन केन्द्र विजयी भयो। यस खेलमा बीएमकेका विवेक श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी १५ स्कोर दिलाएका थिए।
हिमशिखर युवा क्लब, पर्वत र सेञ्चुरी युवा क्लब, छोम्रोङ बी बीचको प्रतिस्पर्धामा ४५ स्कोरविरुद्ध ४८ स्कोरले सेञ्चुरी युवा क्लब, छोम्रोङ विजयी भयो। यस खेलमा सेञ्चुरीका जर्सीनं. २३ का पुजन गुरुङले १४ स्कोर दिलाएका थिए।
त्यस्तै, पाँचौ खेलामा ताङतिङ युवा क्लब र सेञ्चुरी युवा क्लब, छोम्रोङ ए बीचको खेलमा २७ का विरुद्ध ७८ स्कोरले ताङतिङ युवा क्लब विजयी भयो। यस खेलामा ताङतिङ युवा क्लबका धन गुरुङले सबैभन्दा बढी २० स्कोर दिलाएका थिए।
छैठौं खेल उल्लेरी युवा क्लब र रोंधी क्लब घान्द्रुक ए बीचको खेलमा २७ का विरुद्ध ३६ स्कोरले उल्लेरी युवा क्लब विजयी भएको छ। खेलमा उल्लेरीका थम पुनले सर्वाधिक १४ स्कोर गर्न सफल भएका थिए।
त्यसैगरी, विशाल मिलन केन्द्र र हिमशिखर युवा क्लबबीचको अन्तिम खेलमा ५४ का विरुद्ध ६८ स्कोरले विशाल मिलन केन्द्र, काठमाडौं विजयी भयो। खेलमा विशाल मिलन केन्द्रका विकास गुरुङले सर्वाधिक २८ स्कोर दिलाए।